3 Ụmụnna m, ọ bụghị ọtụtụ n’ime unu kwesịrị ịbụ ndị ozizi,+ ebe anyị maara na anyị ga-anata ikpe ka ukwuu.+ 2 N’ihi na anyị niile na-asụ ngọngọ ọtụtụ ugboro.+ Ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị asụ ngọngọ n’okwu,+ ọ bụ onye zuru okè,+ nke nwere ike ịchịkwa ahụ́ ya dum. 3 Ọ bụrụ na anyị ekee eriri ndị e ji achịkwa ịnyịnya+ n’ọnụ ịnyịnya ka ha wee na-erubere anyị isi,+ anyị na-achịkwa ahụ́ ha dum. 4 Lee! Ọbụna ụgbọ mmiri, ọ bụ ezie na o buru oké ibu, bụrụkwa nke ifufe siri ike na-enugharị, a na-eji obere ụmara+ ụgbọ na-akwọ ya ka ọ gaa ebe onye nọ n’isi ụgbọ chọrọ ka ọ gaa. 5 Otú ahụkwa, ire bụ ihe dị nta nke dị n’ahụ́, ma ọ na-etu ọnụ dị ukwuu.+ Lee ntakịrị ọkụ ọ na-ewe iji suo oké ọhịa ọkụ! 6 Ire bụ ọkụ.+ N’ime ihe niile dị anyị n’ahụ́, ire jupụtara n’ajọ omume, n’ihi na ọ na-eme ka ahụ́ dum nwee ntụpọ,+ ọ na-amụnyekwa usoro ndụ nke sitere n’okike ọkụ, Gehena* na-amụnyekwa ya ọkụ. 7 N’ihi na a pụrụ ịzụ̀ ụdị anụ ọhịa niile na nnụnụ na ihe na-akpụ akpụ na anụ bi n’oké osimiri, ụmụ mmadụ azụ̀wokwa ha.+ 8 Ma ire, ọ dịghị mmadụ ọ bụla pụrụ ịzụ̀ ya. Ọ bụ ihe ọjọọ siri ike nchịkwa, o jupụtara ná nsí na-eweta ọnwụ.+ 9 Anyị na-eji ya agọzi Jehova,+ bụ́ Nna anyị,+ anyị na-ejikwa ya abụ ụmụ mmadụ ọnụ,+ bụ́ ndị e kere “n’oyiyi Chineke.”+ 10 N’otu ọnụ ahụ ka ngọzi na ịbụ ọnụ si apụta. O kwesịghị ekwesị, ụmụnna m, ka ihe ndị a si otú a na-eme.+ 11 Isi mmiri+ ọ̀ na-esi n’otu oghere asụpụta mmiri na-atọ ụtọ na nke na-elu ilu? 12 Ụmụnna m, osisi fig ọ̀ pụrụ ịmị mkpụrụ oliv, ka osisi vaịn ọ̀ pụrụ ịmị mkpụrụ fig?+ Mmiri nnu apụghịkwa ịgbapụta mmiri na-atọ ụtọ. 13 Ònye maara ihe ma nwee nghọta n’etiti unu? Ya jiri ịdị nwayọọ nke e ji mara amamihe gosi ọrụ ya+ site n’ime omume ọma. 14 Ma ọ bụrụ na unu nwere oké ekworo+ na esemokwu+ n’obi unu, unu adịla na-etu ọnụ+ ma na-agha ụgha megide eziokwu ahụ.+ 15 Nke a abụghị amamihe nke si n’elu bịa,+ kama ọ bụ nke ụwa,+ nke anụ ahụ́, nke ndị mmụọ ọjọọ.+ 16 N’ihi na n’ebe e nwere ekworo+ na esemokwu, n’ebe ahụ ka ọgba aghara na ihe ọjọọ niile na-adị.+ 17 Ma amamihe+ nke si n’elu bu ụzọ dị ọcha,+ na-emekwa udo,+ nwee ezi uche,+ dị njikere irube isi, jupụta n’ebere na ezi mkpụrụ,+ ọ dịghị akpa ókè n’ihi ile mmadụ anya n’ihu,+ ọ dịghị ihu abụọ.+ 18 A na-aghakwa mkpụrụ+ nke ezi omume+ n’ebe udo+ dị maka ndị na-eme udo.+
^ Lee Ihe Odide Ntụkwasị nke 9.